Kuratidzira Vagadziri veKemendi & Vatengesi | China Kudhizaini Mafekitori eKama
3 Muna 1 Inotenderera Pet Shedding Turu
3 Muna 1 Rotatable Pet Shedding Turu inosanganisa ese mashandiro ekudhirowa deshedding uye yenguva dzose kuyana zvakakwana.Makombi edu ese akagadzirwa nesimbi isina simbi .saka anogara kwazvo.
Pushira bhatani repakati uye tenderera 3 Muna 1 chinotenderera chinodurura peturu chinja kushandura mabasa aunoda.
Muzinga wekuteura unobvisa undercoat yakafa uye bvudzi rakawedzerwa zvakanaka.Iyo ichave yako mubatsiri akanakisa panguva yekudonha mwaka.
Muzinga wekudzikisa une mashizha gumi nemanomwe, saka unogona kubvisa mapfundo, tangles nemata nyore.ma blade akachengeteka akatenderera magumo.Haizokuvadza chipfuwo chako uye chengeta yako refu ine vhudzi remvere jasi kupenya.
Wekupedzisira pane wenguva dzose muzinga. Uyu muzinga une akanyatsopararira mazino.saka unobvisa dander uye nhata zviri nyore kwazvo.zvakanakawo kune nzvimbo dzinotetepa senge nzeve, mutsipa, muswe uye dumbu.